Millet Oligopeptide Powder- Emeputa orylọ ọrụ
Millet oligopeptide ntụ ntụ bụ millet oligopeptide ntụ ntụ bara ụba n'ọtụtụ amino acid na mineral ndị amịpụtara site na millet site na iji usoro ihe omimi banyere njikọ dị iche iche dị ka mgbagwoju oke enzymatic hydrolysis. O nwere isi na-esi isi ma na-enweghi uto ilu, enwere ike ịgbanye ya ngwa ngwa na mmiri.
Mbelata nke ngwugwu millet oligopeptide ntụ bụ ihe na-erughị 1000u, na ọnụọgụ protein hydrolyzate nwere ike iru 90%, nke dị mfe na-emetụta ahụ mmadụ.Ọ nwere ezigbo ihe antioxidant.
Millet Oligopeptide ntụ ntụ vidiyo
Millet Oligopeptide ntụ ntụ nkọwa
Product Name Millet oligopeptide ntụ ntụ ntụ
molekụla Wasatọ <1000u
Agba White ma ọ bụ Light edo edo
Sịkwa akwa Tigwe Na-echekwa na ụlọ okpomọkụ na kwesịrị enịm ke jụụ na nkụ
Antinye Nri, nri nlekọta ahụike, nri ọrụ
Kedu ihe bụ Millet Oligopeptide ntụ ntụ?
Ka ọ dị ugbu a, a na-ejikarị ọka oligopeptide eme ihe maka nlekọta ahụike na nri ọrụ.
Kedu uru nke Millet Oligopeptide ntụ ntụ?
Millet oligopeptide ntụ ntụ nwere mmetụta immunomodulatory doro anya
Millet oligopeptide ntụ ntụ nwere mmetụta mmụba doro anya na lymphocytes òké, nke na-egosi na peptide millet nwere ike ịkwalite ọgụ cellular. Ọzọkwa, Millet peptide nwere ike meziwanye ọrụ phagocytic nke oke macrophages na splin, nke na-egosi na peptide millet nwere ike melite ọgụ nke ahụ site na mgbochi na-enweghị oke.
Millet oligopeptide ntụ ntụ nwere ọrụ antioxidant siri ike
Onu ogugu nke millet oligopeptide na DPPH free radical bu 68.93%, nke nwere ike belata hemolysis nke uhie uhie ma belata mmeputa nke MDA n'ime imeju, nke gosiputara na peptide millet nwere oru antioxidant siri ike.
 Mmetụta immuno-modulatory nke millet peptides na ụmụ oke
 Nkwadebe nke Millet Peptide na Ọrụ Ya Antioxidant.
Yak ọkpụkpụ collagen peptide ntụ ntụ